ठूलो र सुन्दर, अफ्रिकी महादेशमा अक्सर चलचित्र सबै तरिका विशेष छ, खेल र पुस्तकहरू. यो जंगली र otherworldly स्थान संग छ र विदेशी स्थानीय र विश्व को सबैभन्दा आकर्षण मा सटही, Igt हालै एक भारी अफ्रिकी विषय संग अनलाइन स्लट खेल जारी छ. जंगली जीवन भनिन्छ,एक स्लट कुनै जम्मा अनलाइन जो अघिल्लो शताब्दीयौंदेखि बेला जहाज-लोड द्वारा अन्वेषकहरूको आकर्षित कि अफ्रीका को enchanting र रहस्यमय पक्ष देखाउँछ. तर खेल traversed र खोज्नुभयो गर्न योग्य हुनुहुन्छ? गरेको पत्ता गरौं.
जंगली जीवन बेतहाशा Enchanting छ
यो स्लट कुनै जम्मा अनलाइन तीन पङ्क्तिहरूसँग पाँच रील आउँछ. र साथै, खेल दस निश्चित paylines. WINS को संभावना संग वास्तविक वास्तवमा बनाइएका भइरहेको भए तापनि सही र विपरित बाँकी, यो एक उदार बीस paylines गर्न अनुवाद. को रील एक बांस फ्रेम भित्र सेट र creeping बोटहरू ढाकिएको छन्. मसला कुराहरू गर्न दृश्यमा एक शानदार सूर्यास्त अवधिमा विशिष्ट अफ्रिकी Savannah संग.
यो स्लट मा मुख्य प्रतीक कुनै जम्मा अनलाइन खेल unsurprisingly एक गैंडा छन्, जिराफ, हात्ती, जेब्रा र बाघ. तल्लो मूल्य प्रतीक K हो, Q, जे र एक. तर केही कायरता अफ्रिकी शैली तिनीहरूलाई थपिँदैछ.
जंगली प्रतीक यो रात मा एक एक्लो बाटो मा भेट्न बिरामी-सल्लाह हुनेछ एक गर्जन सिंह छ. यो प्रतीक दुई चार रील मा देख्न सकिन्छ. जब यो फारम विजेता Combos मद्दत गर्छ, यो majestically सारा रील भर्न विस्तार. यसबाहेक, यो सबै अन्य प्रतीक स्क्याटर सुरक्षित प्रतिस्थापन गर्नेछ. संग स्क्याटर अफ्रिकी महादेशमा एक रचनात्मक नक्शा हुनुको.
मलाई एक बोनस गर्जन
यो स्लट मा बोनस कुनै जम्मा अनलाइन खेल विरल हुन सक्छ. तर तिनीहरू अझै पनि मनोरंजक र पर्याप्त बढी छन्. बोनस सुविधाहरू बीच मुख्य निःशुल्क स्पिन मोड छ. गरेको यो सबै के हेरौं.
फ्री Spins- तीन अप र अफ्रीका नक्शा स्क्याटर प्रतीक रील जुनसुकै ठाउँमा उतरा पुग्दा निःशुल्क स्पिन सुविधा यो स्लट मा सक्रिय हुन्छ कुनै जम्मा अनलाइन खेल. बराबर तीन छरिन्छ उतरा दस मुक्त spins. चार पन्ध्र मुक्त spins बराबर र पाँच तपाईं बीस मुक्त spins आशिषित प्राप्त मतलब.
यो मोड मा कुनै पनि थप स्क्याटर प्रतीक एक उपस्थिति राख्नु पर्छ, दुई अतिरिक्त spins तपाइँको खेल्न छन्. तपाईं मुक्त स्पिन मोडमा हुँदा र रील कुनै पनि जंगली बारी गर्नुपर्छ, यो तपाईंको निःशुल्क spins सम्म यसरी रहनेछ राउन्ड अन्त मा छन्.
यो एक पूर्ण उत्कृष्ट स्लट साँच्चै बाहिर जाँच लायक भन्ने कुनै जम्मा अनलाइन खेल छ. जबकि यो केही लागि पनि सरल हुन सक्छ, यो अझै पनि अन्वेषण लायक छ. बाट एक RTP स्पोर्ट 92.16% र 96.16% खेल पक्कै बाहिर दिन्छिन्. र आकर्षण साथै.